Football Khabar » टोटनह्यामसँग हारेपछि तनावमा ग्वार्डिओला : खेलपछि के–के भने ?
टोटनह्यामसँग हारेपछि तनावमा ग्वार्डिओला : खेलपछि के–के भने ?
इंग्लिस प्रिमियर लिगको साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटी यो सिजन घरेलु लिगमा खराब अवस्थामा छ । ऊ अनौपचारिक रूपमा उपाधि होडबाट आउट भइसकेको छ । किनभने, ऊ हाल समान खेलेपछि २५ खेलसम्म अपराजित रहेको लिग लिडर लिभरपुलभन्दा स्पष्ट २२ अंकले पछि छ । लिगमा अब मात्रै १३ खेल बाँकी रहेकाले सिटीलाई उपाधि होडमा फर्किन खेल नै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । किनभने, लिभरपुलले अब केही खेल जिते ऊ लिग च्याम्पियन बन्नेछ ।
गत राति २५औं खेलमा सिटी टोटनह्यामसँग अवे मैदानमा २–० ले हारेपछि सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले निकै निराश प्रतिक्रिया दिएका छन् । खेलपछि मिडियासँग बोल्दै उनले आफूहरू प्रिमियर लिगको उपाधि होडबाट केही समयअघि नै आउट भएको बताए । ‘आज होइन, हामी दुई महिनाअघि नै उपाधि होडबाट बाहिर गइसकेका थियौं,’ ग्वार्डिओलाले भने, ‘यस लिगमा १० अंकले पछि पर्नु भनेको पुनः उपाधि होडमा फर्किन असम्भवजस्तै नै हुन्छ । हामी त २२ अंकले पछि भयौं ।’
ग्वार्डिओलाले आफूहरूको ध्यान अब अर्को सिजन प्रिमियर लिगका लागि टप–४ मा रहेर छनौट हुनुमा केन्द्रित हुने बताए । ‘अब हामीले अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्न टप–४ मा रहेर छनौट हुने विषयलाई लक्ष्य बनाउनुपर्छ,’ ग्वार्डिओलाले भने, ‘अब हामी यो सिजनका अन्य प्रतियोगितामा अब केन्द्रित हुनेछौं ।’
ग्वार्डिओलाले अब आफूहरूले प्रमुख ध्यान च्याम्पियन्स लिगमा लगाउने बताए । च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा सिटीले स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड प्रस्पिर्धी पाएको छ । ‘अबको हाम्रो प्रमुख लक्ष्य च्याम्पियन्स लिगमा हुनेछ, हामी यो प्रतियोगिता जित्न चाहन्छौं,’ ग्वार्डिओलाले थपे ।
प्रकाशित मिति २० माघ २०७६, सोमबार १३:२७